Sintomy ny firmware ofisialy ho an'ny terminal Samsung | Androidsis
Raha jerena ny olan'ny mpampiasa maro an'ny Androidsis hiverina amin'ny fanjakana niaviany, miaraka amin'ny firmwares ofisialy ho an'ny terminal Samsung, sy ireo fanontaniany marobe amin'ny alàlan'ny bilaogy; Nanapa-kevitra ny hanoratra ity lahatsoratra ity miaraka amina horonantsary manazava aho mba hampianarana anao ny fomba fampiasana ny endrika vaovao amin'ny tranokalan'ny sammobile.com.
En sammobile.com manana eo am-pelatanantsika isika, maimaim-poana tanteraka firmware tany am-boalohany ho an'ny terminal be an'habakabaka amin'ny zotram-pirenena Koreana lehibe.
Amin'ity horonantsary manazava ity dia manandrana mampianatra ireo mpampiasa very kely aho, ny fomba fampiasana ilay tranonkala voalaza etsy ambony mba hahombiazany amin'ny fomba mahomby. fampidinana firmware irina ho an'ny fitaovanao manokana.
Mampiasa ny tranokalan'ny sammobile.com isika dia mila ny mpamily samsung ary misoratra anarana ao aminy maimaimpoana, dingana tsotra sy haingana izay tsy hitondra antsika mihoatra ny iray minitra.
Raha vao voasoratra anarana dia hanana fidirana amin'ny rehetra isika firmware an'ny Samsung ofisialy, tsy ho an'ireo ofisialy ihany ho an'ny terminal misy ny rafitra miasa Android, ary io dia ao amin'ny sammobile.com ihany koa no ahitantsika ireo firmware mifandraika amin'ireo terminal misy azy miaraka amin'ny rafitra fiasa Bada, Windows Phone, Symbian ary Limo.
Raha vantany vao alaina ny fisie ilaina dia anjarantsika izao Android, tsy mila mamaha ireo rakitra fotsiny izahay ary mampandeha azy amin'ny alàlan'ny OdinHo an'ity dia manoro hevitra anao aho hanaraka ny dingana amin'ny fampianarana samihafa noforonina ho an'ny fitaovana samihafa, satria samy manana ny azy manokana fitaovana hampiasaina sy ny fizotrany flashing samihafa ny tsirairay.
1 Ahoana ny fanavaozana ny findainao amin'ny firmware vaovao
2 Aiza no misintona firmware ho an'ny Samsung
Ahoana ny fanavaozana ny findainao amin'ny firmware vaovao
Raha ny momba an'i Samsung, matetika ny fanavaozana dia maharitra ela vao mahatratra ny mpampiasa rehetra. Noho izany, ny tsy manam-paharetana indrindra mametraka ny firmware avy any amin'ny faritra hafa amin'ny findainaoka tsy mila miandry ny OTA izy ireo. Io dia ahafahanao manavao ny findainao mialoha ny fotoana. Rehefa any amin'ny faritra misy anao io fanavaozana io dia tsy tokony hahazo OTA intsony ianao, satria tokony hamantatra fa efa manana ny firmware vaovao ianao, izany hoe ilay fanavaozana. Ho an'ny fanavaozana manaraka, ny zavatra mahazatra dia ny fandraisanao ny OTA tsy misy olana. Fa azonao atao foana ny misintona fanavaozana amin'ny tanana, indrindra amin'ny tranga fanavaozana ny firmware izay avoaka ho an'ny telefaona.
Raha tsy te hiandry ny fanavaozana ianao, afaka maka firmware avy any amin'ny faritra hafa izahay, amin'ny tranokala toa an'i Sammobile na Stockrom. Ireo karazana fisie ireo dia azo alaina ao amin'ireto pejy ireto. Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona azy, izay azonao atao amin'ny solosainao, mba hananana ity rakitra ity ary ahafahana manomboka.
Raha vantany vao nilaza ny rindrambaiko alaina izahay, tonga ny fotoana hametrahana azy. Somary saro-pantarina ny fizotrany, ankoatry ny fanovana betsaka arakaraka ny marika amin'ny telefaona. Soa ihany, ao amin'ny pejy anaovana azy ireo dia misy torolàlana, izay ahafahantsika manaraka tsikelikely izay tokony hataontsika, mba tsy hanao fahadisoana isika. Ny tsy fahombiazana amin'ity karazana dingana ity dia mety hahatonga ny telefaona tsy ho azo ampiasaina. Ka mila mitandrina ianao.
Amin'ny telefaona sasany, azonao atao ny mampiasa ABD hahafahanao mametraka azy amin'ny telefaona. Amin'ny maodely hafa, toy ny amin'ny Samsung, dia mila mampiasa ny maody fampidinana ianao ary avy eo mampiasa Odin amin'ny telefaona mifamatotra amin'ny PC, mba hahafahana mametraka azy. Ny marika hafa dia manamora azy, toy ny amin'ny ASUS, izay mila adikao fotsiny ilay rakitra amin'ny fahatsiarovan'ny telefaona ary avereno indray. Amin'ny tranga rehetra, ny zava-dehibe dia ny fanarahana ny torolàlana, izay manazava izay tokony hatao arakaraka ny telefaona anananao amin'ny tranga misy anao.
Aiza no misintona firmware ho an'ny Samsung
Ankoatra ny Sammobile, misy safidy tsara hafa azonao atao misintona mora foana ny firmware Samsung ofisialy. Ity tranokala ity dia Stockrom, izay afaka mitsidika an'ity rohy ity ianao. Amin'ity tranonkala ity dia azo atao ny manana fidirana amin'ireo firmware misy ny marika koreana, izay azonao atao ny misintona amin'ny findainao. Izy ireo dia havaozina hatrany ary misy safidy maro amin'io lafiny io.
Loharano - sammobile.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fampidinana ny firmware ofisialy ho an'ny terminal Samsung
Ny tsara indrindra rehefa ny rafitra efa novaina be. Avelao izy io factory miasa 100%
Manolo-kevitra hatrany aorian'ny fametrahana roms vitsivitsy, hanatanterahana ny fametrahana ny firmware voalohany izay manadio ny zava-drehetra.
Salama, namana tsara Francisco, manana fanontaniana aho. Nividy roa volana lasa izay aho modely galaxy s3 mini GT-I8190 izay mitondra famantaranandro. 4.1.1 fa esory io kinova voalohany io ary apetraho ny kinova hafa efa masaka, izao dia te-hametraka ilay kinova voalohany aho, ampidino ny rom avy amin'ny tranokala firmware izay milanja 657 mb fa ao anaty rakitra voafintina dia misy rakitra antsoina hoe HOME_I8190LUBALJA_I8190LUWAALJ4.tar.md5 ary tsy mitondra bebe kokoa, Ankehitriny tsy haiko ny mametraka azy amin'ny Odin satria io rakitra io ihany no alaiko sary an-tsaina ny pda, fa ny fomba ataoko amin'ireo safidy hafa noho ny Modem sy CSC.
Ny fanampianao sy ny hevitrao.
Mandeha amin'ny PDA izy io, tafiditra ao daholo izay ilainao. Tar.
Tamin'ny 15/04/2013 00:26 PM, «Disqus» nanoratra:
Misaotra, hanao fitsapana aho.
Luis Manuel Lupiáñez León dia hoy izy:
Salama daholo, manana telefaona Samsung Galaxy Amp SGH I407 aho ary mitady ilay Rom amin'ny Sammobile tsy hitako. Azafady, mila ny fanampianao aho satria tsy nahita ny stock Rom na taiza na taiza. Toa tsy avy amin'ny Samsung ity maodely ity. Aio ihany koa izay miseho araka ny angom-baovao notadiavina avy tany Etazonia. Io no Samsung voalohany manome ahy aretin'andoha. Misaotra miarahaba.
Valiny tamin'i Luis Manuel Lupiáñez León
Ahoana no hahavitako an'izany? Te avelako amin'ilay iray izay nanavao tamin'ny alàlan'ny ota
Mora toy ny misintona ny firmware ary mampidina azy amin'ny maody fisintomana amin'ny alàlan'ny ódin.
Mamaly fanontaniana roa i Paco amiko. Ho an'ny Galaxy S I9000. Hitako fa ho an'i Espana dia misy safidy firmware FOP misy ankoatr'ireo mpandraharaha.
Inona no ataon'ny FOP.
Ankoatr'izay, raha mampiasa Yoigo aho ary mametraka firmware amin'ny orinasa hafa, misy olana ve? Mijanona tsy havoaka raha mametraka olon-kafa aho? Sa ny hany zavatra ataony dia ny mametraka ireo rindranasa apetraky ny orinasa tsirairay avy ao anaty terminal vaovao?
Na inona na inona firmware-nao apetrakao dia hijanona ho afaka ny telefaona, ny zavatra tokana hanananao dia ny fahombiazan'ny mpandraharaha voalohany resahina sy ireo fampiharana efa napetraka.
Tsy maintsy apetrakao amin'ny tanana ihany koa ny apn.
Tamin'ny 05/04/2013 01:31 PM, «Disqus» nanoratra:
Pedro Alejandro Carias Fuentes dia hoy izy:
Mila fanampiana amin'ny Samsung indro te hanavao
ny rindrambaiko, niditra ny safidy fanavaozana ny lozisialy aho ary milaza amiko fa (Tsia
Tsy misy rakitra fanavaozana ny firmware) Ahoana ny fomba anaovako azy? Ary raha azonao atao
hametraka kinova hafa an'ny firmware.
Misaotra ny fanampianao
Valiny tamin'i Pedro Alejandro Carias Fuentes
tehina dia hoy izy:
Andriamatoa Francisco, misaotra tamin'ny vaovao. manana samsung corby aho ary te-handrehitra azy amin'ny firmware ho an'ny samsung genoa c3510. raha ny fahitako azy dia mitovy ny singa enti-miasa ao aminy. handeha ve izany? misy torohevitra ve? arahaba =)
Valiny amin'ny tsorakazo
lucasmendoza dia hoy izy:
Salama olona, ​​ny zava-mitranga amiko izao dia ny tsy fahazoako stock rom ho an'ny galaxy core i8260 satria ny serfera cerro sy sammovile dia nanana ny firaketana rehetra, ary maika izany raha misy manana na manana backup dia tena tiako izany. betsaka 🙂
Mamaly an'i lucasmendoza
salama ry olona tiako avela ny olako qx marina manana fanamarihana ratsy aho manana naoty 2 ary herinandro lasa izay nisy olona nanomboka nihantona, misy mahalala izay hataoko hamahana ny olana? Ampio x faaa..misaotra
Salama Francisco, mipetraka any Venezoelà aho ary nitondran'izy ireo ahy Samsung Galaxy Core I8260 avy any Espana, ny andalana ahy dia avy amin'ny Movistar ary tsy afaka mifandray tsara amin'ny lampihazo aho, any Edge ihany no anaovana azy, afaka manampy ahy ve ianao, hoy izy ireo Izaho fa tokony hametraka ny firmware ho an'i Venezoela, fa raha ny marina dia somary very aho, mankasitraka ny fiaraha-miasa rehetra azonao omena ahy. Mirary ny soa indrindra
Mamaly an'i nahi
anti-panahy dia hoy izy:
Salama namana, ahoana no fomba sintomiko ny kinova rindrambaiko tsirairay?
Valiny ho an'ny loholona
talaky masoandro dia hoy izy:
manao ahoana ianao FRANCISCO !! Azafady, mila miditra ny kaonty sammobile aho ary tsy afaka misoratra anarana ... tsy manome ahy io sary io! asio rom ratsy ary ovako ny imei !! Izy io dia neo i9060l tsara avy any Arzantina (mazava ho azy) .. manomboka izao, misaotra !!
Mamaly amin'ny masoandro
Jonny dia hoy izy:
Salama Francisco Ruiz! Mbola ho afaka ve ny mpitatitra raha mampiasa rindrambaiko Sammobile aho?
Mamaly an'i jonny
Salama Francisco, fantatrao fa nomen'izy ireo s2 i9100 aho hamoahana azy, aparitako amin'ny kingoroot ary avy eo nampitako azy tamin'ny z3x hamoahana azy, avy eo omeko ny mpampiasa super mamaky azy tsy misy olana sy ny zava-drehetra ary tampoka nahazo zavatra aho toy ny mampifandray ny telefaona, mety ho simba izany ary misy eto dia tsy te handrehitra bebe kokoa izy na tsy hahafantatra azy ny pc na koa maka ny fomba fanarenana na ny fomba fampidinana ary nosedraina tamin'ny batery hafa ary tsy nisy nahavoa ilay mpanamory sy amin'ny isa avoakany toy ny hoe handrehitra fa tsy mampiseho mariky ny fiainana afaka manampy ahy ve ianao dia tena tiako izany…
Salama manao ahoana .. mametraka fimware tsara daholo aho fa ny finday kosa mamelombelona ahy ary mihantona amin'ny logo samsung :, (.. inona no atolotrao?
mauriciovillanueva2010o Villanueva dia hoy izy:
HELLO tiako ho fantatra hoe ahoana ny fandefasana ny SAMSUNG I9060M
Valio amin'i mauriciovillanueva2010o Villanueva
Salama, nametraka firmware aho avy amin'ny sammobile miaraka amin'ny odin mankany amin'ny my core core 18260l ary ankehitriny dia tavela tsy misy tambajotra aho, miantso vonjy maika fotsiny aho. Azonao atao ve ny manampy ahy na milaza amiko ny antony tokony hanaovana izany
ylainez93 dia hoy izy:
Ampitain'izy ireo amiko ny sarimihetsika momba ny galaxy core prime SM-G360T1
Mamaly an'i ylainez93
Luis Montenegro dia hoy izy:
Salama, tsy misy ny pejy hisintonana ny firmware, misy mahalala ve raha misy pejy hafa?
Valiny tamin'i Luis Montenegro
Ny olako dia tsy afaka manavao ny rindrambaiko findaiko aho satria mahazo famantarana milaza fa nohavaozina tsy misy alalana ny fitaovako, miditra amina pejy antsoina hoe Samsung kies aho.
Tadidiko fa nahita horonan-tsary azo havaozina amin'ny kinova farany tamin'ny androi raha nanokatra ny telefaoniko aho dia notsindriako ny fanalahidin'ny volume plus ny fanalahidy on / off ary ny lakilem-panombohana dia nataoko izany ary nisy taratasy niseho tamiko nilaza fa Notsindriako na hidina ny lakilem-bokotra, nataoko izay voalazan'ny horonantsary ary notsindriako ambony ny lakilen'ny volume ary niseho ilay saribakoly androi maintso toa manova azy ireo. Niandry minitra vitsivitsy aho ary rehefa nitohy dia nanazava sy nanala ny bateria satria tsy maty tsy ara-dalàna ary tsy nisy fiovana.
Tiako ianao hanampy ahy.
Manana samsung galaxy grand prime aho ary milaza ilay maodely hoe SM-g530m.
Tadidiko ny fahitako horonan-tsary iray izay nilaza fa azo havaozina amin'ny kinova android farany izy ity raha nanokatra ny telefaoniko aho dia nanindry ny bokotra miampy ny fanalahidy on / off ary ny fanalahidy fanombohana, nataoko izany ary I taratasy iray nipoitra milaza ny hanindry ny bokotra ambony na hidina, nataoko izay voalazan'ny horonantsary ary notsindriako ny bokotra volume ary niseho ilay saribakoly android maitso toa nanova azy ireo. Niandry minitra vitsivitsy aho ary rehefa nanohy dia nesoriko ny batery satria tsy maty tsy ara-dalàna izy io ary tsy nisy fiovana.
legna dia hoy izy:
hello francisco manana olana amin'ny findaiko samsung note s4 ny zanako vavy nanadino ny teny miafina ary tsy afaka miditra ao aminy aho dia nanandrana tamin'ny mode recovcery fa ny monitor android ihany no manjelatra ary tsy mihetsika intsony misaotra na olona manampy ahy
Mamaly an'i legna
kaper dia hoy izy:
rehefa mametraka ny firmware ny galaxy e7 sm-e700m dia tsy mandeha ny wifi .. azafady azafady
Mamaly an'i kaper
Julio Efren Moreno dia hoy izy:
Nangetaheta aho, hita fa mipetraka any Kiobà aho ary nisy namana nanome ahy samsung galaxy core prime sm-g360t1 ary araka ny ahalalanao ny farany eto amin'ity firenena ity ary sambany eto an-tanàna no misy fidirana amin'ny Internet amin'ny toerana ampahibemaso sasany. amin'ny alàlan'ny WiFi ary mazava ho azy satria voaloa isan'ora. Eny ary nanandrana namaka aho ary nanao izany saingy tsy nampihariko ny famohana ny oem tao amin'ny mpamorona ary ny kernel dia nosakanan'ny blocker message avy amin'ny frp nandany vola be aho mandra-pahitako ny tongotro voakorontana teo amin'izay nisy azy. Azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny tsipika mahomby izay hahitako ny telefaona ROM samsung galaxy core prime sm-g360t1 by metropc
Valiny tamin'i Julio Efren Moreno
Moderator azonao soratana amin'ny mailako fa manana olana amin'ny fisoratana anarana amin'ny sammobile aho
rickardo1996 dia hoy izy:
ampio aho amin'ny kaonty izay ezahako hisoratra anarana ao amin'ny SAMMOBILE mandritra ny 2 andro ary tsy misoratra anarana amiko izany
Valiny tamin'i rickardo1996
Salama, salama, te hanampy anao aho, tsy afaka namorona kaonty tamin'ny sammobile aho, mila azy maika aho mba hampidina ny firmware ho an'ny galaxy tab 2 10.1 GT-P5110 ho an'i Kolombia
ampio aho azafady !!!!
ivan murillo dia hoy izy:
Salama hariva dia tiako ianao hanampy anao hamaha ity olana ity, amin'ny findaiko dia hitako fa voasakan'ny FRP ny binary mimari-droa, io no maodelin'i Samsung galaxy core voalohany SM-G360T1, avy amin'ny orinasa metro pcs any Etazonia izy io, inona fandaharana mila esoriko ve izany olana izany?
Mamaly an'i ivan murillo
jesus adriancamacho dia hoy izy:
Ahoana ny momba ny namako, satria ny ahy ny praiministra lehibe toa ahy fa novaina tsy nisy fanomezan-dàlana ny fitaovako, izany no mitranga, te-hanavao azy aho fa tsy afaka manampy ny tenako, azafady.
Mamaly an'i Jesosy adriancamacho
Rodney dia hoy izy:
INDRINDRA NY Drafitra Ho an'i PARAGUAY
Valiny tamin'i Rodney
tsara tsy afaka mamaha unzip rindrambaiko alaina avy amin'ny sammobile aho
Alina alina manana modely Koreana Samsung Galaxy S5 G9006V tiako hapetraka ilay rindrambaiko satria ny telefaona mamela ireo fampiharana rehefa miditra dia tsy voafehy, iza no afaka manome ahy ilay rindrambaiko hametraka azy.
vicky saenz dia hoy izy:
Niezaka ny nisintona ny firmware maimaim-poana ho an'ny galaxy core2 Colombia nandritra ny roa andro aho, ary rehefa niandry ora maromaro ny fisintomana, tsy hamela ahy hamoaka ny zotran'ilay rakitra izy, milaza amiko fa tsy mety io. Afaka manampy ahy ve ianao?
Valio i vicky saenz
ABEL SALAZAR DIAZ dia hoy izy:
Salama, manana olana amin'ny findaiko aho, nanandrana nanavao aho ary ankehitriny manjaka tsy tapaka ary tsy afaka miditra amin'ny fomba fanarenana aho, nisintona rindrambaiko vitsivitsy aho, saingy Odin dia manome ahy hadisoana, azonao atao ve ny manampy ahy, ny mailako dia abel@portadavision.icrt.cu ny maodely an-tariby Samsung MS-G130HN, dia fanomezana avy amin'ny sakaiza iray mipetraka any BARCELONA
Valiny tamin'i ABEL SALAZAR DIAZ
Salama tsara, mila mahazo ilay rakitra PIT aho handefasana SM_G361F. Misy olona afaka manampy ahy.
Miarahaba anao, manana GT-S7582 aho ary tsy mahazo ny firmware izay ampiasaina eto Venezoela, azafady mba ampianaro aho hahafantatra hoe iza amin'ireo no ampiasaina eto azafady? Na raha manana telefaona an'ity modely ity ianao dia azonao atao ve ny mampita amiko ny angona izay miseho amin'ny fampahalalana momba ilay fitaovana izay milaza ny baseband, ny kinova ary ny angona hafa, azafady mba ampirisiho aho.
László dia hoy izy:
aorian'ny fanavaozana ny samsun s8 avy amin'ny t-mobile dia tsy vitako ny manamboatra azy satria milaza amiko fa nisy andrana famerenana orinasa tsy nahazoana alàlana, mangataka amiko izy hifandray amin'ny wifi ary rehefa manao izany aho dia milaza amiko fa tsy afaka miditra ny tranonkala. Inona no azoko atao?
Mamaly an'i laszlo
Voamarina: Tsy hisy ny kinova 5G an'ny Huawei P30
Lalao tena mpiady Street Fighter miaraka amin'i Tiny Gladiators 2